Investment Kukanda Foundry, Simbi Investment Kukanda - Yungong
Mining Machinery Kukanda
Kudzima moto Kukanda
Medical Chigadzirwa Kukanda
Dzedu Zviratidziro Rekodhi
ZKJB-300 Vacuum Chisanganiso Series
Chimiro chedu cheyipayipi yekuzadza chisanganiso kunoenderana neyakajairika mamiriro uye kubatanidza hunhu hwekukurumidza -chando chikafu chinogadzira indasitiri.
sarudza zvaunofarira zvigadzirwa
Zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya muValves pumps impellers pipe fittings,
mota chikamu, muchina wekudya, chicherwa michini zvishongedzo, Hardware chishandiso zvigadzirwa uye simbi kushongedza.
Pombi & Valve Chikamu ...
Plumbing zvigadzirwa uye Pipe ...
Kanda Simbi kamwene
Metal diversion chubhu kuora ...
Pombi Fittings Cas ...
Kushanda pa: Chinhu chinotenderera ...
Investment castings anoshandiswa mu ...
Chigadzirwa Chiremba Ca ...
Izvo zvinhu zvakaoma ...
Tinogona kupa mari c ...
Hardware kukanda ...
Simbi yekushongedza Chinyorwa: ...
Nemazvo kukanda ...
Chikafu michina zvikamu - - packi ...
Castings yeMoto ...
Zvese zvinhu zvinogadzirwa ...
Zvakanakira Precision ...
Metal Kuparadzanisa Tube
Pump Valve Kurumidza Kubatanidza
Inowanikwa muXingtang County hupfumi hwenyika dzichiri kusimukira, Shijiazhuang Guta, ine nharaunda ye40000 mativi emamita uye vanopfuura vashandi ve300. Icho chigadzirwa chetekinoroji inosanganisa R & D, dhizaini, kugadzira, kutengesa uye sevhisi sevhisi.
The kambani iri ainyanya kuita zvakarurama Kudzingwa uye chikafu michini kugadzira. Investment yekukanda maitiro ndeye silicon sol, iine gore rinobuda rinosvika mazana matatu ematani e castings.
Ndezvipi zvinhu zvinogona kukanganisa kunaka kweanokanda kune vagadziri vesimbi vachikanda?
Chivabvu / 06/2021
Iyo mhando yeiyo castings ine simba rakakura pane echimakanika michina, senge iyo impeller yemapombi akasiyana siyana, saizi yemukati mhango yeiyo hydraulic zvikamu, yakagadziriswa ganda, iko kurongeka kwetambo yekuumba uye nehupamhi hwekunze, nezvimwe. Matambudziko achaita ...
Precision vachikanda vagadziri vanotsanangura maitiro esilika sol kukanda zvakadzama!
Ikozvino mari yekudyara chaiyo kukanda maitiro kuri kukura nekukurumidza, uye inozivikanwa nekuda kwekunakidzwa uye kwakachena chitarisiko. Zvinoenderana nezvazvino kuitika, zvikamu zvigadzirwa zvinogadzirwa nemazvo kukanda mune ramangwana zvichave zvakanyanya kuwedzera. ...
Mamwe matanho akakosha eiyo yekukanda maitiro mune chaiyo kukanda!
Nemazvo Kudzingwa kwakajairika kukanda muitiro mune simbi vachikanda vagadziri, asi ikozvino kukura hakuna kufanana nevakawanda simbi castings uye simbi castings, asi nemazvo Kudzingwa kunogona kuwana yakaenzana chimiro uye nehurefu hwekukanda kunyatsoita. Kunyanya comm ...
Tarisiro yesimbi indasitiri muHebei Province Dunhu Rezvekuvandudza Nzvimbo
Kuti tishande kuvhura mamiriro matsva epamusoro-soro ekuvandudza indasitiri mudunhu medu, muna Kurume 24, boka rinotungamira redunhu redu rakaita ongororo yemunda kumasangano anoenderana nemaindasitiri, masangano ekutsvagisa, mabhizinesi ekutanga uye .. .
Nhungamiro yakakosha yekuchenesa JR-D120 Yakagwamba nyama grinder nenzira kwayo
Jr-d120 chishandiso chakakurumbira, asi pese paunobata nyama mbishi, kuchenesa kunodiwa kudzivirira mabhakitiriya uye mabhakitiriya kubva kumasara. Zvisinei, kuchenesa grinder yako hakuna kusiyana nekuchenesa vamwe vabiki. Mushure meizvozvo, kuchengetwa kwakaringana kwenhengo dzayo kunobatsira kuona kuti iri mushe ...